Ahmed sudani – Kismaayo24 News Agency
by Ahmed sudani 20th June 2018 064
by Ahmed sudani 20th June 2018 076
by Ahmed sudani 20th June 2018 073
by Ahmed sudani 20th June 2018 072
Magaalo xeebeedka Warsheekh ee Gobolka Shabeelle Dhexe waxaa gaaray Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo xubno la socda. Madaxweynaha wafdigiisa...
Dawladda Eritrea Oo Sanado dheer ka dib Wada Xaajood la fureysa Itoobiya.
by Ahmed sudani 20th June 2018 068
Dowladda Eritrea ayaa ergo u diraysa dalka ay dariska yihiin ee Itoobiya si ay u billaabaan wadahadalladii lagu dhaqan galin lahaa heshiiskii nabadda ee soo...
HARGEYSA:- Somaliland Oo Xabsiga Ka Siidaysey Boqor Buur Madow.
by Ahmed sudani 20th June 2018 066
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa waxa ay sheegayaan in maanta la siidaayay Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buur-madow) oo horay Maxkamad...
AKHRISO:- Xildhibaan Fiqi Oo Madaxweyne Farmaajo ku dhaliilay Heshiiskii Itoobiya.
by Ahmed sudani 20th June 2018 0154
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka falceliyay Wareysi uu xalay siiyay Madaxweyne Farmaajo Warbaahinta dowladda. Xildhibaanada waxaa...
by Ahmed sudani 19th June 2018 050
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway kulan gaar ah kula yeeshay Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay,...
Xiisad Dagaal Oo Ka Taagan Deegaano Ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe.
by Ahmed sudani 19th June 2018 049
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeelaha Dhexe, ayaa sheegaya in maanta xiisad dagaal iyo saan saan colaadeeed ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha...
Dawladda Canada Oo Lacago Ugu Deeqeysa Soomaaliya iyo Dallal Kale.
by Ahmed sudani 19th June 2018 072
Dowladda Canada ayaa sheegtay in lacago gargaar ah ay ugu deeqeyso dalalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimoquraadiga ee Congo iyo Niger oo ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca...
Shir Looga Hadlayo Amniga Deegaanada Jubbaland Oo Ka Socda Kismaayo.
by Ahmed sudani 19th June 2018 064
Waxaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose lagu soo gabagabeeyo shir looga hadlayo amniga guud ee maamulka...
Askari Ka tirsan Nabad Suggidda Oo Muqdisho ku toogtay Askari kale.
by Ahmed sudani 19th June 2018 0116
Askari ka tirsan ciidamada Nabad suggida ayaa maanta Magaalada Muqdisho waxaa uu ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidamada Ilaalada Wadooyinka. Dilkaan ayaa ka dhacay degmada...
Ciidamada Xoogga Dalka Oo la Wareegay degaano ka tirsan Jubbada Hoose.
by Ahmed sudani 19th June 2018 061
Wararka ka imaanaya Gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaaya in Ciidamo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta Weerar ku qaadeen degaano ka tirsan gobolka...
AKHRISO:- Madaxweyne Gaas Oo Wareegto Ku Magacaabay Garyaqaanka guud ee Puntland.
by Ahmed sudani 19th June 2018 055
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Gaas ayaa Maxamed Yuusuf Maxamuud u magacaabay Garyaqaanka guud ee Puntland ,sida ku cad wareegto goor dhow ka soo baxday xafiiska madaxweynaha....
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Dawladda Oo lagu Xanibay Garoonka Aadan Cadde.
by Ahmed sudani 19th June 2018 069
Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa maanta Saacaddo badan u diiday Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi in uu ka dhoofo garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde. Xildhibaanada...
Guddoomiye Mahad Cawad Oo kormeer ku Tagay Xarumaha Golaha Shacabka.
by Ahmed sudani 18th June 2018 073
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa maanta koormeer shaqo ku tagay xarumaha golaha shacabka. Guddoomiye...
by Ahmed sudani 18th June 2018 055
Ergo ka socda dowladda Soomaaliya ayaa hadda ku sugan gudaha Maxkamadda Calaamiga ee Garsoorka (ICJ) ee magaalada Hague. Eerga ka socda Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa...
Ra’iisul Wasaare Khayre iyo Wafti uu Hogaaminayo oo gaaray Dalka Norway.
by Ahmed sudani 18th June 2018 059
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Oslo oo ay si heer sare ah ugusoo dhaweeyeen...
Howlgallo Ballaaran Oo Ka Socda Deegaano ka Mid ah Gobolka Shabeelaha Hoose.
by Ahmed sudani 18th June 2018 066
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in howlgallo ay ka bilowdeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi. Howlgallada oo ah kuwa...
DHAGEYSO:- Eng-Yariisow “Soomaaliya Waxaa jooga Diplumaasiyiin ka Maseyray Turkiga”
Ahmed sudani 18th June 2018 18th June 2018
by Ahmed sudani 18th June 2018 18th June 2018 058
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng,Cabdiraxman Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa marka hore amaanay dowladda turkiga oo uu sheegay in waajibkii looga baahnaa ay ka...
Khasaareka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay Dalka Japan.
Dhul gariir xooggan oo ku dhuftay magaalada labaad ee ugu wayn dalka Japan ee Osaka, ayaa waxaa ay korantida kaga go’day tobonnaan kun guri. Waxaa...
SAWIRRO:- Banaanbax Balaaran Oo Ka dhacay Magaalada Garoowe.
by Ahmed sudani 18th June 2018 063
Mudaharaad balaaran oo shacabka Garowe ay kaga soo horjeedaan maamulka Somaliland ayaa maanta ka dhacay Magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland. Maamulka gobolka Nugaal iyo kan...
Uganda Oo Shiinaha ugu Baaqday In Muddo Kordhin Loo Sameeyo Ciidamada AMISOM.
Ahmed sudani 17th June 2018
by Ahmed sudani 17th June 2018 047
Ra’iisul wasaaraha dalka Uganda Ruhakana Rugunda ayaa kadalbay Dowladda China in ay Gacan kagaysato daalada lagu Nabadeynayao dalalka Somalia iyo South Sudan, Kadib kulan ku...
AKHRISO-XOG ku Saabsan Wasiirada Uu dhawaan Magacaabayo Madaxweyne Xaaf.
by Ahmed sudani 17th June 2018 048
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda inuu kaga dhawaaqo magaalada Dhuusamareeb Gol eWasiiro oo cusub. Madaxweyne Xaaf ayaa...
DHAGEYSO:- Wararkii ugu danbeeyay Duqeyn diyaaradeed Oo Ka dhacday Ceel-Cadde.
by Ahmed sudani 17th June 2018 060
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in saakay ay halkaasi ay ka dhacday duqeyn Diyaaradeed oo geystay khasaaro...
AKHRISO:- Wasaaradda Kaluumeeysiga Soomaaliya Oo Digniin U Dirtay Kaluumeysatada.
by Ahmed sudani 17th June 2018 071
Wasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Bada Soomaaliya, ayaa soo saartay digniino ku aadan halis ka soo foolleh badda, waxaana ay u digtay kaluumeysatada ka jilaabta xeebaha...
SAWIRRO:- Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo xafiis cusub ka furatay Buula-burde.
by Ahmed sudani 17th June 2018 077
Hay’adda Socdaalka iyo jisniyadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xafiis lagu qabto howlaha Hay’adda waxa ay ka furatay Magaalada Buula-burde ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda xariga...
Banaanbax Looga Soo horjeedo Somaliland oo ka dhacay Gaalkacyo.
by Ahmed sudani 17th June 2018 065
Wararka naga soo gaaraya Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay Banaanbax Ballaaran oo looga soo...
SAWIRRO:- Wafdi uu Hoggaaminaayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka dhoofay Muqdisho.
by Ahmed sudani 17th June 2018 064
Wafdi uu hoggaaminaayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa goordhow ka Ambabaxay Magaalada Muqdisho, waxaana ay kusii jeeddaan dalka Norway sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan...
AKHRISO:- Qodobada ugu Muhiimsan Heshiiskii ay kala Saxiixdeed Soomaaliya iyo Itoobiya.
by Ahmed sudani 16th June 2018 086
Kadib kulan muhiim ah oo maanta muqdisho ay ku yeesheen madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hoggaaminayay raiisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu heshiiyay...
by Ahmed sudani 16th June 2018 059
Wararka laga helayo gobolka Sh/ Dhexe ayaa sheegaya in Fatahaado hor leh Wabiga Shabelle uu ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolkaasi. Wabiga ayaa Saacadihii la...
DEGDEG:- Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Oo Ka Dhoofay Magalada Muqdisho.
by Ahmed sudani 16th June 2018 053
Goordhow waxaa Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magalada Muqdisho ka dhoofay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo booqasho mudo Saacado ah qaadatay ku jooga Magalada Muqdisho....
Wararkii ugu danbeeyay Dagaal Alshabaab iyo Ciidanka Dawladda ku dhexmaray G/Baay.
Wararka ka imaanaya Deegaanka misir ee Gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta uu ka dhacay Dagaal u dhaxeeya ciidamada Dawladda kuwa koonfur galbeed iyo Alshabaab....
DHAGEYSO:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Sugidda Ammaanka Muqdisho.
by Ahmed sudani 16th June 2018 064
Xili maalmihii u danbeeyay ay xirnaayeen jidadka magaalada muqdisho arrimo la xariira ammaanka magaalada ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay Ra’iisul wasaaraha Dalka xasan cali kheyre....
AKHRISO:- Soomaaliya iyo Itoobiya Oo ku Heshiiyay Maalgashiga 4 dekedood iyo Mashaariic Kale.
by Ahmed sudani 16th June 2018 056
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa Madaxtooyada Soomaaliya ku qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo wafddi uu hoggaaminayo oo maanta soo...
Isbaheysiga Sacuudiga oo qabsaday Garoonkii Magaalada Xudeyda.
Wararka naga soo gaaraya dalka Yemen ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada dalka Yemen ee ay taageeraan isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa qabsadeen garoonka diyaaradaha...
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo Madaxweyne Farmaajo Oo Warbaahinta la hadlay.
by Ahmed sudani 16th June 2018 071
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo maanta booqasho ku yimid Magaalada Muqdisho & Madaxweyne Farmaajo ayaa goor dhow Warbaahinta kula hadlay xarunta Madaxtooyadda. Madaxweynaha...
Ra’iisul wasaare Kheyre oo magacaabay guddiga Qaran ee qaban-qaabada Todobaadka Xorriyadda.
by Ahmed sudani 14th June 2018 075
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa lagu magacaabay guddi heer Qaran ah oo ka kooban Toban Xubnood,...
by Ahmed sudani 14th June 2018 084
Marwada Koowaad ee Dalka Maamo Seynab Cabdi Macallin ayaa maal-gelisay barnaamij indha fiiqis loogu sameynayo boqolaal ka mid ah dadka araga waxyeellada ka qaba. Wajiga koowaad ee...
by Ahmed sudani 14th June 2018 072
Dowladaha Soomaaliya iyo Denmark ayaa heshiis qarsoodi ah oo dhigaya in dadka magangalyo doonka ah ee Soomaalida ah dalka Soomaaliya dib loogu soo celin karo....
by Ahmed sudani 14th June 2018 061
Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta amray in garoonkii Jeenyo lagu banneeyo muddo 3 cisho ah si...
by Ahmed sudani 14th June 2018 064
Midowga Europe waxay shalay shaaciyeen Kaalmo Dhaqaale oo cusub oo lagu maalgelinayo sidii Nabad loogu soo dabaali lahaa dalalka ay colaadaha ka jiraan. Hadal-qoraal oo...
by Ahmed sudani 14th June 2018 076
Sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Dawlad Degaanka Soomaalida Itoobiya dagaal ayaa mar kale maanta ka qarxay agagaarka Degaanka Tulli Guuleed. Dagaalkaan ayaa u dhaxeeya...
Dawladda Soomaaliya Oo Fasaxday Shaqaalaha Dawladda iyo kuwa gaarka ah.
by Ahmed sudani 14th June 2018 052
Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa maanta ku wargalisay in dhammaan Shaqaalaha Hey’adaha Dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba in shaqaalahooda ay fasax yihiin maalmaha...
SAWIRRO:- Madaxweynaha Galmudug Oo Dhuusamareeb ka dhagax dhigay Xarumo Muhiim ah.
by Ahmed sudani 13th June 2018 052
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxda Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta siwadajir ah uga dhagax dhigay Magaalada Dusmareeb Caasimadda Galmudug...
by Ahmed sudani 13th June 2018 065
Ciidamada ammaanka dalka Turkiga ayaa maanta gacanta ku dhigay 224 Qof oo muhaajiriin ah kuwaasi oo ay ku jiraan Soomaali. Laamaha ammaanka ee dalkaasi ayaa...
Guddoomiyihii Hore ee G/Banaadir Oo si kulul uga Hadlay Xayiraada Waddooyinka.
by Ahmed sudani 13th June 2018 066
Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa si adag uga hadlay xayiraada la saaray shacabka Muqdisho iyo dilalka isi soo taraya ee lagu hayo...
by Ahmed sudani 13th June 2018 059
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Janaraal Cabdiweli Jaamac Gorod iyo Saraakiil ka tirsan taliska ayaa maanta gaaray Magalada Kismaayo ee Xarunta KMG ee dawlad goboleedka Jubbaland. Janaraal Cabdiweli...
Somaliland oo aqbashay dhex dhexaadinta Beesha Caalamka.
Maamulka Somaliland ayaa aqbalay dadaalada nabadeed ee Beesha Caalamka ka dhex wadaan iyaga iyo Puntland, si loo soo afjaro xiisada dagaal ee ka taagan deegaanka...
SAWIRRO:- Haweenay Soomaali ah oo ku geeryootay shil Ka dhacay Mareykanka.
Ciidamada Booliska dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in shil gaari ay ku dhimatay Haweenay Soomaali ah todobaadkaan gudihiisa,waxaana uu Shilkaan dhacay magaalladda BURLNGTON ee gobolka VERMONT. Taliyaha Booliska degaanka uu...